Ot'u esi eji ndi di iche icp weputara ime ka ndi mmadu guzosie ike na gburugburu gi
Ịtụtụla DeviantART siin pole ị ka ọwa nkwalite ọdịnaya gị?
M ägav DeviantART pole kindel, m ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä, aga DeviantART iji on hävitatud..
Nke ahụ bụ ihe nwute, n’ihi na DeviantART (M ​​ga-akpọ ya DA maka obere ogere ụfọdụ na post a) karịrị karịa peeji ngosi maka ndị na-ese ihe. DA bụ netwọọdụ mmekọrịta site na isi ruo na mkpịsị ụkwụ, yana oge a na-achọsi ike maka ndị na-ese ihe na ndị na-ede akụkọ ifo, ọ na-enye ndị na -ede blọgụherehere niile.
Ajaveebid (akwụkwọ akụkọ)
Igbe mkpu igbe
Njikọ ndị akwadoro na nkọwa na ntinye ederede (a na-akpọ kõrvalekalded)
1 Kedu Mgbe Ntanye Nkwado Kwesịrị Ekwesị Nye Gị?
2 Nzọụkwụ 1 – I Chọrọ Mkpa Ndị Dị na Ya
3 Nzọụkwụ 2 – Gaa na Touch
4 Nzọụkwụ 3 – Jiri platvorm, mis on loodud
4.1 1. Ndenye ederede
4.2 2. Ihe edeturu (Ozi nkeonwe)
4.3 3. Kõrvalekalded (art & Ideederede)
5 Nzọụkwụ 4 – Jiri Uru Nyocha
6 Pole vaja DA-d?
6.1 1. Relationshippulite mmekọrịta gị site na Readinggụ Ndị Na-eso’zọ Ọhụrụ na Ndenye Journal
6.2 2. Gaa na okwu ọ bụla ị nwetara
6.3 3. Nwee Obiọma. Zere Ọnụ ahịa ahịa na Voice Nkwado n’Ọrụ Niile
6.4 4. Mee ka ndị ọbịa gị na ndị na-eso ụzọ mee ka ọ dị mfe ịmụtakwu maka ọdịdị gị na echiche gị
6.5 5. Mee Ezi Omume nke Ọdịnaya gị na-ele anya ma na-amụba ma ọ bụ na-eme ka ọ dị na ọdịnaya
7 Kedu ihe ị ga-ezere na ndị ọzọ dị iche iche?
7.1 1. Elegharala etikett anya
7.2 2. Jiri nlezianya na foto foto ọ bụla i jiri
7.3 3. Jiri nlezianya na-arụ ọrụ "na-esi n’ike mmụọ nsọ."
7.4 4. Na-eme ihe ike Spam
8 Jiri Ezi Ihe Ndeputa on minu ikke, kui ma näen, et ta on bara uru
8.1 Mee nchịkọta Google
9 Wepụ jah
Kedu Mgbe Ntanye Nkwado Kwesịrị Ekwesị Nye Gị?
Inwe ọdịnaya gị na obodo dị na DA na-enye aka ma ọ bụrụ na niche ntanetị gị na-adaba n’ime otu n’ime ebe ndị a:
Eserese & Ihe nkiri
Weole ike ịrụ ọrụ na mpaghara ndị ọzọ, ma ọ bụrụ na ị bụ ihe okike iji weta ụwa kachasị mma (nchịkọta gị na ihe anya).
Nke a bụ maka otú m eji DeviantART na 2013 met ka ndị Fännid na-agụ 20 + na ndị na-agụ akwụkwọ akụkọ m na-agbaso m na ntanetị na site na listi nzipu ozi onwe. Minu ajaveebis on kõik inimesed, kes pole enam mkpirikpi, sest meil pole veel ühtegi robotit, kes on peategelased. Blogi n’onwe ya bụ ebe nrụọrụ weebụ iji kwado akụkọ m na akụkọ ihe osise. Akwụkwọ n’ihu bụ ebe m blogi banyere akụkọ, ehchiche, edemede, nyochaa, mmemme ma na-ekwurịta okwu na obere obere fandom.
Nzọụkwụ 1 – I Chọrọ Mkpa Ndị Dị na Ya
Enwre m aha na DeviantArt dị ka onye na-ese i he nayeye ededede. Kemgbe m na-abanye na 2004, m wuru otu ndị agbụrụ gburugburu ụlọ ahịa m, ndị niile nwere ezigbo mmasị site na ọrụ m na onye mụ na ya rụpụtara.
Friendlybụ ndị na-eme enyi na onye na-emeghe uche bụ ihe na-arụ ọrụ na DeviantART kacha mma, n’ihi na ndị na-ese ihe na ndị edemede anaghị eji ikpo okwu maka ọnụọgụ na nkatọ, kama iji wulite niile.
Oi olid ụtụtụ afọ iji zụlite mmekọrịta ma mee ka ndị bịara bụrụ ndị egwu. Ka m tinye na emeghị m ihe ọ bụla pụrụ iche – nke amamihe dị na ya – iji mepụta obodo a, wezuga oge iwepụta DeviantArt iji zute ndị na-ese ihe na ndị edemede, na-ekwu banyere banare ọrụ ha, na-ekwu banyere ọrụ ha ntinye m na stereye aka na mkparịta ụka na akwụkwọ akụkọ. ndenye (bishọp isi na nkeonwe nke DeviantArt; enwekwara m nke m).
Mgbe m kpebiri ịkwalite ịdị adị nke blọọgụ akụkọ m na mgbakwunye na mhewororịrị na DeviantART, eji m ihe ndekọ na nkọwa na ntinye (Demissions) iji tinye njikọ na arịrịọ maka nzaghachi.
Ote ihe atụ bụ ntọala nke akụkọ m na m nọgidere na blog m ruo ọtụtụ afọ, ma na m kpebiri iweghachi na DA iji nwetakwuo nzaghachi, Project ALLIFE. Taa na ọdịda ahụ na-atụle inhegos 1,002, ọkacha mmasị 12 yana inhe 64.
Nzọụkwụ 2 – Gaa na Touch
Nzọụkwụ ọzọ na-agbalị ịnweta ha ịgbaso mmelite na ọdịnaya ha kacha amasị m na ajaveeb. Saidi n’iji ndetu ederede, akpọrọ m obodo m ka m leba anya na ajaveebi mka, ma olen kariri i zigara DeviantART.
Nke ahụ bụ nzọụkwụ dị mkpa: Agwara m ndị na-akwado m na enyemaka m dị njọ nke ukwuu, n’ihi na ejighị m n’aka na ụfọdụ mkpebi m gbasara blọọgụ ga-esi metụta mmasụ ndị na-ak , weuust ihe ga-adị ọnụ ahịa karịa nzaghachi ha.
Iji mee ka o doo anya, ịbanye na DA abụghị naanị ihe gbasara ijikwa nzaghachi ị nwetara, kamakwa gụnyere ịbanye na ndị Fännid saidi n’oge ruo n’oge; dịka ọmụmaatụ, saidi n’ịgụ na ịza ajụjụ banyere ntinye akwụkwọ akụkọ ọhụrụ ha ma ọ bụ ihe osise kachasị ọhụrụ ma ọ bụ ibe ederede ha. Enwere m ike ịmatakwu banyere nke a n’ikpeazụ n’isiokwu a, ma ọ bara uru ịkpọtụrụ ebe a, kwa.
Echiche nke obodo na DeviantART dị ike; ezinụlọ-dị ka ụzọ. M ga-akọwakwa na post na ụdị omume ọ bụla nke na-agafe ala na spämmimine na plagiaat nwere ike ịda mbà n’obi n’elu ikpo okwu a (ọ bụghị naanị DA; Kingged.com na-arụ otu ụzọ ahụ; iji obodo ahụ bhe on inye onyinye na ịnata, nhazi nke abụọ).
Nzọụkwụ 3 – Jiri platvorm, mis on loodud
Kas te olete ainult iji mee ka ndị agbakwunye m ajaveeb? Ana m eji akụkụ kachasị ike nke profaịlụ DA m: My Deviant Journal.
Edere m akwụkwọ ọhụrụ banyere Ebe m ga-esi kọwaa ihe ụmụ m ga-achọta na akụkọ m na-akọ na ọ bụrụ na ha ga-enwe obiọma dị ka ime ka m mara ihe ha chere banyere ya, ma ọ bụrụ na -enwe mmasị ịbanye na nzipu ozi pụrụ iche ndepụta maka ndị okenye "raske" fännid.
1. Ndenye ederede
Imirikiti ndị bi na obodo DA na-agụ ma na-ekwu banyere ntinye akwụkwọ m karịa nke Kõrvalekalded m, jaa, ọ bụ ebe kachasị mma iji dọta uche mmadụ niile. Ọdee akwụkwọ bụkwa ebe ndị ọrụ DA na-enwetakwu ihe na nkọwa ha, yabụ nzaghachi m natara ebe ahụ nwere nghọta karịa ihe m nwetara n’ebe ọzọ n’elu ikpo okwu.
Ejikwa m DeviantART Journal kwalite akaụntụ Twitter m maka blogi; otu o sila dị, enweghim ihe ịga nke ọma na ya (enweghị azịza banyere ntinye ma ọ bụ naanị ndị na-eso ụzọ 3 ọzọ) , ọ dịkarịa ala ndị nọ na netwọk m. Agbanyeghị, a na m akpọ gị oku ka ị nwaa ụdị nkwalite mgbasa ozi a kwa; Oo, ei ike ịrụrụ gị ebe ọ na – arụghị m.
2. Ihe edeturu (Ozi nkeonwe)
Maka ndị m maara agaghị agụ akwụkwọ m maka ebumnuche ọ bụla, ezigara m Ihe ngosi (ozi nkeonwe na DA) na akụkọ ahụ ma rịọ maka nzaghachi.
Enwere m ike iji ụda ịnụ ọkụ n’obi na ozi m, n’ihi na nke ahụ bụ ụda ụda maka nkwurịta okwu ọha na Lake na mkparịta ụka onwe onye.
Nke a bụ otú m si nweta 10 + maka ndị na-ama m onwe m-naanị ndepụta nzipu ozi maka akụkọ ntanetị.
3. Kõrvalekalded (art & Ideederede)
Ụzọ ọzọ iji kwalite ọdịnaya gị bụ Ngwa. Nanị bulite otu akụkụ nke ọdịnaya gị (otu edemede, ihe oyiyi ma ọ bụ obere vidiyo) nke na-ejikọta ụdị zuru ezu na blogi gị.
Emere m nke a akụkọ mkpirikpi m hapụrụ. Weei olnud ike ịhụ nseta ihuenyo n’okpuru:
Dịka ị pụrụ ịhụ, edere m naanị paragraf abụọ mbụ nke akụkọ m dị mkpirikpi, emesịkwa m gbakwunye "Na-aga n’ihu …"Jikọọ na nke ọzọ na ya na ajaveeb. Kuna meil pole midagi muud, kui te ei tea, kui olete teinud ogoloogipostitusi.
Iji gbakwunye ozi ndị ọzọ – gụnyere ikikere omenala maka ọdịnaya m – ejiri m njirimara nkọwa na ụdị ntinye m:
Ọ bansrụ na ịchọrọ ka ndị Fännid na-aza naanị na blogi gị ma ọ bụghị na DeviantART, na-ekwuchi i gbasara Deviation ma na-akpọ ndị ọbịa gị ka ha kwuo okwu na post the post. Otú ọ dị, ana m akwado ka ịhapụ ọwa abụọ ahụ meghere ma ọ bụrụ na ịchọrọ n’ezie nzaghachi, n’ihi na ọ bụghị onye ọrụ DA ọ bụla ga-achọ ịhapụ ikpo okwu iji kwuo.
Ọụ nụtinịịụụụ i i ihehehehe i i i i i i mg mg mg mg mg mg mg mg posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts posts.
Nzọụkwụ 4 – Jiri Uru Nyocha
Mgbe ọnwa ole na ndị ndị na-egwu egwu m matara gbasara blọọgụ ahụ, achọrọ m nzaghachi ọzọ banyere ya na ihe ndị dị na ya, yabụ ejiri m akwụkwọ akụkọ ahụ ọzọ kerta. Eji m DeviantART märgib ziga njikọ nke nyocha ahụ nye ndị m maara na agaghị agụ akwụkwọ m.
Ebe bụ njikọ na ntinye na nyocha ahụ maka ịhụ. Rịba ama na m natara 17, kui te pole admrm mmasị natinye ahụ naanị ma ọ bọghị na ajaveeb.
Na mbido 2015, ezigara m akwụkwọ ntinye akwụkwọ ọzọ iji rịọ maka nzaghachi ọzọ na ọdịnaya m na blọọgụ ahụ, ebe DA Polls anaghị arụ ọrụ m nke ọma. Nke a bụ otu ntinye si ele anya:
N’okwu a, ndị na-azaghachi na CTA na-ahọrọ ihe edeturu na ozi ịntanetị dị ka ụzọ nkwurịta okwu maka nzaghachi.
Pole vaja DA-d?
Dị ka na Kingged, ịnweghị ike ịga na spam. Ị ga-emerịrị ya mepụta ezigbo mmekọrịta, site n’obi, n ’obi agụụ maka ọdịnaya gị na ọ joyụ isoro ndị ọzọ kerịta ya. N’aka ozo, ị gha aghaghi ibu “onye obi okacha mara”, oburu n’onyeghi onye na-ese ihe n’ise aka gi ma o bu na i tinyeghi akwukwo banyere nka.
Saidi na ịmepụta na ịzụlite mmekọrịta, ị na-emepụta ihe na-esochi. Lee ụfọdụ ndụmọdụ bara uru iji duzie gị.
1. Relationshippulite mmekọrịta gị site na Readinggụ Ndị Na-eso’zọ Ọhụrụ na Ndenye Journal
Kwado ndị na-eso ụzọ gị na ndị ọkpọ gị dịka ha si akwado gị. Oge ọ bụla ị kwụsịrị n’akụkụ akwụkwọ akụkọ ha na akwụkwọ akụkọ ma ịhapụ nzaghachi na ọrụ ha, ị na-azụlite mmekọrịta gị na ndị a, na-ekekọta náị naf nata nafe nata nafe nata nafei Ọ bm mmalite nke a ọbụbụenyi, ihe ị kwesịrị ịba uru dị ka blogger, n’ihi na ọ dịghị blogger were ike im ka ka ọ nọọ n’enweghị ndị na-elekọta ha n’ezie.
Nke a bụ eziokwu maka ikpo okwu ọ bụla ị na-eji, mana DA. Ọzọkwa, ọdịnaya nke ndị na – akwado gị nwere ike ịgba gị ume ịmepụta ọdịnaya ka mma.
2. Gaa na okwu ọ bụla ị nwetara
Ndị na – eme ihe ngosi na – enwe mmasị iji oge dị mma na – ekwu banyere ọrụ ndị ọzọ na ntinye akwụkwọ, n’ihi na ha maara na ọ bụ nnukwu ụzọ iji wulite mmekọrịta siri ike.
Nke a bụ ihe ị ga-eme ozugbo ị malitere ịza ajụjụ banyere ọrụ gị: zaa ajụjụ ndị a! Enweghị mmekọrịta ga – amalite (ma ọ bụ na – azụlite) ruo mgbe i kwetara ma nyeghachi ndị na – ekwu okwu gị nzaghachi.
Mee ka ndị egwu gị hụ na ị hụrụ ihe ha kwuru. Na nkwanye ugwu, ha ga-esoro gi ogologo ma ghakwa inwe ohere maka echiche ohuru obula i n’enye n’iru.
3. Nwee Obiọma. Zere Ọnụ ahịa ahịa na Voice Nkwado n’Ọrụ Niile
Isi nke ndi obodo bu ezi ochicho izute ndi ohuru ma wulite mmekorita gburugburu nka na ide. Ejekwala ire ahia, ekupula rämpspost: ihe ndi ahu bu uzo oku iji gbafu ndi n’eso uzo (ndị nche) ma ọ bụ iji kọọrọ ya ndị ọrụ maka spämmimine.
Müügitulu on-na-ere ahịa anaghị arị ọrụ na DA. Mgbalị nkwado gị ga-abụrịrị nke ezigbo, mmekọrịta, ị ga-egosi na i kwenyere n’ihe ị na – eme (ma tean, et ma ei tea?). Nke abụghị ụfọdụ aghụghọ SEO na-enweghị uche nke webmasters ji mee ihe n’oge gara aga – nke a bụ ịbụ ihe n’etiti ụmụ mmadụ.
4. Mee ka ndị ọbịa gị na ndị na-eso ụzọ mee ka ọ dị mfe ịmụtakwu maka ọdịdị gị na echiche gị
Ntinye njikọ maka ọdịnaya gị na blogi bụ ụzọ isi gaa, ma, "ime ka ọ dị mfe" abụghị naanị maka njikọ – ị ga-agba ndị agbụrụ gị ume ka ị pịa, na iji mezuo nke ahụ, ị ​​ghaghị ịhụ na ha chere mma ime otú ahụ.
Kọwaa otú ihe si arụ ọrụ na saịtị gị, na ị gaghị etinye nzuzo ha, na saịtị gị nwere nchekwa iji chọgharịa ma tinye oge. Ọzọkwa, jikọta ọdịnaya ị na-emepụta na echiche ndị ọzọ ị maara na ha nwere mmasị na ya. DIKA ọmụmaatụ, O Babirussa na ha nwere mmasị na foto okike na i nwere foto ma o Bu blogi njem, kọọrọ ha banyere foto ndi magburu onwe ha na akwụkwọ akụkọ njem i nwere na gi blogis. Noh, ma ei saa seda teha, kui te ei ajaveebipäevikut ajanud.
5. Mee Ezi Omume nke Ọdịnaya gị na-ele anya ma na-amụba ma ọ bụ na-eme ka ọ dị na ọdịnaya
Ọ bụ ezigbo echiche ịmalite site na ilele anya na DA. Iji maa atụ, te ei ole kunagi nii imelised, kui te osisete ma ọ bụ obere infographic nke na-egosipụta post blọgụ gị: tinye ya aha ma bulite ya dịka ihe osise ma ọ bụ ederede ya na onyonyo / ọkọlọtụ wee tinye nkwaọ wee tinye nkwa akụkụ nke ederede gị.
Mee otu ihe ahụ na ndekọ akụkọ. Na-amalite mgbe ọ na na na na i i iri y y y,,,, j foto j j j j j foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto.
Kedu ihe ị ga-ezere na ndị ọzọ dị iche iche?
1. Elegharala etikett anya
Uuendatud ụdị ọdịnaya ndị anaghị ekwe na nhazi DeviantART dm mma, dị ka ndị okenye na-ese foto na ederede.
Ọ bụrụ na ị ga-emerịrị isiokwu metụtara mmekọahụ, ịkpa ókè agbụrụ ma ọ bụ ime ihe ike, ihe ọ bụla ị biputere ka kwesịrị ịkwanyere ụkpụrụ nduzi ụụ ebụụụ y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Tinye njikọ gị na ebe nrụọrụ weebụ gị maka ihe fọdụrụ n’ime ọdịnaya gị.
Dị ka ọ bụla n’elu ikpo okwu, ihe ọ bụla ọdịnaya na-akwalite ịkpa ókè na ime ihe ike adịghị ekwe ka ọ bụla iwu mba.
2. Jiri nlezianya na foto foto ọ bụla i jiri
Ndị na-arụ ọrụ na DeviantART (na ndị ọrụ ha) na-achọ mgbe niile maka imebi iwu nke nwebiisinka na ikpo okwu nwere iwu megide foto ndị ohi (lee njikọ dm mma na njedebe gara aga).
Enwere ike ịgwa gị maka akwụkwọ na-egosi na ị nọ ikike gị iji foto ndị ị na-eji. Ọ bụrụ na ịnweghị ike inye ihe akaebe ọ bụla, ọdịnaya gị ga-agbadata.
ỌỌụụụịịịikeikeikeikeikeikeikeike ike i iikeikeikeikeike Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative.
3. Jiri nlezianya na-arụ ọrụ "na-esi n’ike mmụọ nsọ."
Ụfọdụ ndị na-ese ihe naddd dere akwụkwọ na-emetụ egwu ma a bịa n’ọrụ mmepụta, yabụ ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ n’ụdị ọdịnaya ọ bụla nke npalọ naka ‘jide ime ikike gị ịmepụta ọrụ mmepụta.
Enweghi ike ime ka mmadu nwe ihe ndi ozo, ma o bu ihe a. Debe ụzọ ị ga-esi na-agafe iji zere nsogbu iwu ma ọ bụ ụkpụrụ omume.
4. Na-eme ihe ike Spam
Ọ bụ ihe a na-anụtụbeghị na ụfọdụ ndị ọrụ DA ga-anwa iji ikike nkwenye nke i he si ntinye akwụkwọ (na ntinye akwụkwọ akụkọ, ihe ndịiche na profaịlọ njirimara. Omume nd ni a niile ga-enweta ntaramahụhụ nke ụdị, site na igbochi onye ọrụ (nke onye ọrụ mejọrọ) ruo na akụkọ mkpesa nke nwere ike ibute mmachi na-adịgide adịgide site na ikpo tin tinụụyeyeyeyeyeyeuruụuru mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb akaụntụ.
Ekwuru m ya na mbụ na post a, m ga-ekwukwa ya ọzọ: emehiela rämpspost, n’ihi na ọ gaghị ewetara gị uru ọ bụla, karịsịa na DA.
Jiri Ezi Ihe Ndeputa on minu ikke, kui ma näen, et ta on bara uru
DeviantART nyere onye ọ bụla egwu ihe eme e ngoi galerii, ọbụlagodi maka ndekọ ego na-akwụghị ụgwọ (n’agbanyeghị na enwereghị oke, dịka m ga-akọwa n’okpuru).
Weeie ikematakwu otu esi nchịkọta akụkọ na-ele anya na peeji nke onye ọrụ na foto ebe a na aka nri: menu ndenye Statistics dị na peeji nke onye ọrụ ka onye ọ bụla pịa ma lelee ya, ọ na-egosikwa ọ na ọnụ ọgụgụ ndị ama ama nke akaụntụ ahụ. Igodo ahụ n’onwe ya bụbebe tebụl ọnụ ọgụgụ, tupu ọ ghọọ "Statistika" na mkpụrụedemede ukwu, dị ka egosiri na foto ahụ. Ugbu a, bọtịnụ m na-egosi:
18 238 kommentaari
98 442 lehevaatamist
Saidi na ịpị bọtịnụ "Ntọala ndị ọzọ" n’okpuru tebụl nke ọnụ ọgụgụ dị mkpirikpi, a-akpọrọ gị gaa na peeji stats na-anakọta ihe niile zuru ezu. Hụ okpuru:
Kedu ihe ị ga-achọ na ibe a?
"Lehevaatamisi kokku" na-agwa gị ole ederede ị ei olnud ka ị bido
"Lere oge X anya" na – agwa gị ugboro ole (n’ozuzu) A na – ekiri ihe ndị dị na galerii gị
"X Deviants na-ekiri" na-egosi ọtụtụ ndị ọrụ DA (ndi mmadu) soro (ekiri) ị
"Natara X kwuru" bụ ọnụ ọgụgụ nke okwu (n’ozuzu) ị nwetara na kõrvalekalded gị
“Agbakwunye na ọkacha mmasị ọkacha mmasị nke X
“Nyere X kwuru ihe 10 natara” oli nükezi nke ekwuputere na ọrụ ndị ọzọ maka nkwupụta 10 ọ bụla ịnata na nke gị (karịa ọnụ ọgụgụ a, ka ị na-emekọrịta ihe kőru site)
"Njehie nke ihe kachasị na-ekwu bụ …" na-egosi gị Mgbapụta nke natara ihe kachasị na ụlọ ahịa gị. Nke a bụ ezigbo ihe na-egosi idd na-ege gị ntị na DeviantART nwere mmasị ma chọọ maka ụlọ ahịa gị
"Ihe kachasị amasị ya, ya na X ọkacha mmasị" na – agwa gị ihe ị ga – eme ka ọ bụrụ nke kachasị amasị gị na ọtụtụ ọkacha mmasị ọ natara
"Ntụle kachasị elepụ anya bụ …" na-agwa gị onye otu n’ime hälbed gị nwetara ọtụtụ nlele ihuenyo, na ole
"E nyere X mmasị maka ihe niile 10 kwuru" bụ ọnụ ọgụgụ ndị ọkacha mmasị ị nwetara maka ihe niile 10 kwuru na ị nwetara n’ọrụ gị (na nkezi)
Ọnụ ọgụgụ nchịkọta ọnụ ọgụgụ gị, tinyere ụbọchị ole gafere n’etiti ntinye (na nkezi) na n’ụbọchị ụbọchị n’izu, n’ụdị ọnụ ọgụgụ
"Ihe ka ọtụtụ n’ime esemokwu na-edebere (ụdị)" na-agwa gị ụdị edemede (Akwụkwọ, Ndịna-emeputa, wdg.) Ị jiri mee ihe mgbe ị debere ọrụ na DeviantART
Ndepụta nke ọnụ ọgụgụ dị oke ọnụ, gụnyere okwu ọnụ ọgụgụ, echiche na ọkacha mmasị site na mgbanwe na kwa ụbọchị, na ihuenyo peeji kwa ụbọchị.
Ndị ọrụ ọ bụla na DeviantART pole siin ịnweta kokkuvõtet taabụ na ibe akụkọ, ebe ndị a na-akwụ ụgwọ (Core) nwere ike ịnweta taabụ ndị ọzọ, nke na-enye nkọwa zuru ezu.
Ọbụna dị ka onye nweere onwe ya, ọ bụ ezie na ị nwere ike ịhọrọ nhọrọ nhọrọ 3 maka Nchịkọta gị: Oge niile, Afga gara aga na Ọnwa 6 ikpeazụ. Nke a na-enye, aka iji tụnyere arụmọrụ zuru oke gị na ọrụ kachasị ọhụrụ.
Mee nchịkọta Google
DeviantART na-enye ndị ọrụ akwụ ụgwọ aka (Ndị otu akụkụ) iji gbakwunye koodu Google Analytics on profa nalụ ha iji nweta kahe kachasị mma nke ụwa abụọ: nchịkọta okporo ụzọ nyocha na nchịkta.
Hụ onye ọbụla na aha njirimara gị n’elu ogwe dị elu na menu ọdịda ga-emeghe. Pịa "Ntọala". Ị ga-ahụ ndepụta nke ntọala Ntọala na nke Onwe na n’akụkụ aka ekpe nke ibe. Pịa na Onwe -> Üldine wee pịgharịa gaa na Ntọala dị iche igbe; n’ihu ya, ị ga-ahụ igbe nchịkọta Google on ogige iji kpochapụ ID Nyocha gị.
Ọ bụrụ na ịmaghị etu esi eme nke a, pịa “Ebee ka m ga – ahụ ID Nyocha m?"Njikọ na-esote n’akụkụ ntinye.
Lee ihe ndị dị mkpa site na isiokwu a!
Jiri DeviantART on ajaveeb, kuhu ei lähe, nkà, akụkọ ntụrụndụ, ịzụ ụmụ na ọdịnaya ndị ọzọ ọ nwere ike ịmepụta n’onwe gị.
Jide n’aka na ị ei olnud enam obi ụtọ isonye na ndụ obodo gị, n’ihi na ọ bụ ezigbo mmekọrịta nke na-eme ka ihe ịga nke ọma na DA.
Mee ka ndi mmadu na-achogharia gburugburu ihe omuma i bulite na jide n’aka na ha maara otua ha nwere ike isi nweta ya na blogi gi.
Jiri uru andmed DeviantART minul on Google Analyticsi kasutuses.
DeviantART bụ ikpo okwu a na-elegharaghị anya nke nwere ike inyere gị aka ịmalite ịzụlite okporo ụzọ weebụ gị.
Ịtụtụla DeviantART ohere dị ka ọwa nkwalite ọdịnaya gị? M gbakwunyere DeviantART na ndepụta
Devtụtụla DeviantART ohere dị ka ọwa nkwalite ọdịnaya gị? M gbakwunyere DeviantART na ndepụta